27.02 Izaho sy Jeso
Anio Talata 27 Febroary 2018 dia ny Lioka 8.16-25, no teny hovakiana, ka hojerentsika ao anatin' io ny hoe inona no lazainy momba an' Andriamanitra Ray ? Jesoa Kristy na ny Fanahy Masina ? inona no ampianariny momba ny olombelona ? inona no toetra tsara alain-tahaka na tsy hatao ? ary farany dia hoe inona no fahamarinana azako raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ?
16 Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy, na nametraka azy ao ambanin’ ny farafara; fa ataony eo amin’ ny fanaovan-jiro izy, mba ho hitan’ izay miditra ny mazava.
Ny nitadiavan’ ny renin’ i Jeso sy ny rahalahiny Azy
19 Ary renin’ i Jeso sy ny rahalahiny nanatona Azy, fa tsy nahazo nihaona taminy, satria nifanety ny vahoaka.
20 Ary nisy nilaza taminy hoe : Ny reninao sy ny rahalahinao mijanona ato ala-trano ta-hahita Anao.
21 Fa namaly Izy ka nanao taminy hoe : Ny reniko sy ny rahalahiko dia ireto izay mandre ny tenin’ Andriamanitra ka mankatò azy.
Ny nampitsaharan’ i Jeso ny tafio-drivotra
22 Ary tamin’ ny andro anankiray dia niondrana an-tsambokely Jesosy sy ny mpianany; ary hoy Izy taminy: Andeha isika hankeny am-pitan’ ny farihy; dia lasa izy.
23 Ary nony nandeha ny sambokely, dia azon’ ny tori-maso Jeso; ary nisy tafio-drivotra nidina tamin’ ny farihy, ka nila ho feno rano ny sambo, ary saiky nahita loza izy ireo.
24 Ary nanatona izy, dia namoha Azy ka nanao hoe: Tompoko, Tompoko, maty izahay ! Dia nitsangana Izy, ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano. Ary dia nitsahatra izany, ka tonga tony tsara ny andro.
25 Ary hoy Izy taminy : Aiza ny finoanareo ? Ary natahotra izy ireo sady gaga ka niresaka hoe : Iza moa Itý, no mandidy ny rivotra sy ny rano Izy, ka manaiky Azy izany !
IZAHO SY JESO
Rehefa nibebaka tamin’ny maha mpanota ahy aho, ary nino an’i Jeso Kristy sy nanaiky Azy hitondra sy hanapaka ny fiainako manontolo, dia nomeny ilay fahazavana aho ary mitafy Azy amin’ny fotoana rehetra sy mandritra ny fiainako manontolo.
Eo amin’io fotoana io aho no nantsoin’i Jeso hoe : “Fahazavan’izao tontolo izao” (Matio 5.14) Ny fahazavana izay entiko dia tokony ho hitan’ny olona rehetra manodidina ahy.
Fahamarinana faran’izay tsotra no entin’i Jeso milaza izany eto amin’ny alalan’ny fanoharana : Ny fanaovan-jiro, hoy Izy, dia apetraka amin’ny toerana avo mba hanazava ny manodidina azy. Tahaka izany koa izay rehetra efa manana ny fahazavan’i Jeso Kristy dia maneho izany fahazavana izany mba hanazava izao tontolo izao izay mbola maizina.
Tsy iza ireo fa izay nandre sy nandray ny Teny araka ny voalaza teo aloha.
Mino sy mankatò ny tenin’Andriamanitra.
Mihoatra lavitra ny rahalahy ara-nofo ireo satria hiaraka aminy mandrakariva eto an-tany hatrany an-danitra.
Ny fahefan’i Jeso Kristy.
Andriamanitra Izy ary manana ny fahefana amin’ny zavatra rehetra na ny olombelona na ny zava-boahary.
Nampangininy sy noroahany ny devoly tao anatin’ny olona, nositraniny ny aretina rehetra ary natsangany aza ny maty fa nampitsaharany koa ny rivotra sy ny alon-dranomasina ka gaga sy talanjona ny mpianatra.
Inona no olanao eo amin’ny fiainana ?
Atolory an’i Jeso Kristy fa hampitony sy hamaha izany Izy.